SERP na-ebupụta Index Search Engine Search Martech Zone
Wednesday, September 12, 2012 Na Tọzdee, Septemba 11, 2012 Douglas Karr
Mgbe ụfọdụ ọgụgụ isi na-eji ngwaọrụ dị mfe. Mgbe ụfọdụ ndị ahịa anyị nwere mgbanwe mberede na nkpoda na ọkwa njin ọchụchọ ha. Ihe mbụ anyị na - eme bụ ịlele ọkwa ndị ahịa ndị ọzọ iji hụ ma mgbanwe ahụ ọ pụtara na ọ bụ eluigwe na ala ma ọ bụ nsogbu mpaghara. ỌRỤ bụrịrị amamiihe, ego adịghị ọnụ maka usoro ọchụchọ na nchịkọta data. Ha agbakwunyela peeji mara mma nke na-egosi etu igwe nyocha si meghachi omume n'ọtụtụ puku saịtị ha na-enyocha.
Ugbu a, ọ bụrụ na ogo gị agbanweela nke ọma na Google ma ọ bụ Bing, ị nwere ike ịga leta Ibe SIPPS volatility index peeji iji hụ otú ụlọ ọrụ ọchụchọ si emetụta saịtị ha iji gosipụta ma ọ bụ nsogbu mpaghara ma ọ bụ na ọ nwere ike ịbụ na ọ gbanwere mgbanwe algorithm nke ụwa. Nnukwu ngwá ọrụ!